Golaha Wax soo saarka - Chapman Technology Co., Ltd.
In geeddi-socodka horumarinta wax soo saarka, qaybta shirku waa mid ka mid ah waaxyadeena ugu muhiimsan. Laga soo bilaabo tijaabada wax soo saarka, isku imaatinka alaabta, shixnadaha alaabada ee dhammaaday, bay'adahan shaqeeya, isku imaatinku wuxuu umuuqdaa mid aad muhiim u ah.
Waxaan uqeybsan nahay labo aqoon isweydaarsi iskuxirka waxyaabaha alaabada elektarooniga ah iyo korontada iyo alaabada caafimaadka. Qeybta shirarka elektarooniga iyo korontada, waxaan leenahay nidaam nabdoon oo qiiqa iyo ka hortagga dabka. Waaxda shirarka wax soo saarka caafimaadka, Waxaan qorsheyneynaa inaan dhisno nidaam wareegga hawada sanadka 2021 si loo hubiyo in jawiga aqoon isweydaarsiga shirka uu la kulmo ISO: heerka tayada nidaamka 13485.
Shirkadaha badankood, iskudubbariddu waa waqti qaadasho iyo qaali. Waxaan bixinaa xalal habaysan laga bilaabo iskudhafka fudud ilaa dhismaha iyo iskuxirka adag. Waxaan soo gaarsiin doonnaa xigashooyin deg deg ah, soo noqosho deg deg ah, jadwal jaangooyo ah iyo natiijooyin tayo leh.
Abuuraha Chapmanwaxay u heellan tahay soo saarista xalalka wejiyada badan leh ee ballaarinaya fursadaha ganacsigaaga. Iyada oo la adeegsanayo baakadaha alaabada caadiga ah, isku imaatinka wax soo saarka, iyo xirmooyinka sheyga, waligeed ma fududaan inaad riyadaada ganacsi nolosha u keento. Kooxdayada naxariista leh waxaa ka go'an inay abuuraan xalal wax soo saar asal ah oo matalaya yoolalka ganacsiga, hagaajinta wax soo saarka, iyo fududeynta howlaha. Iyada oo leh xarumo ku yaal Dongguan, waxaan u soo qaadan karnaa takhasusadeena wax soo saar ee dhagaystayaal aad u tiro badan, oo siinayna taageero khabiir ah oo wax ka badali kara wajiga ganacsigaaga.
Sameeyaha Chapmanisku-soo-saarka badeecada iyo baakadaha ayaa kor u qaadaya rajooyinka shirkadaha fulinta ee dhinac saddexaad, ballaarinta adduunka ganacsiga sida aan ognahay. Iyadoo la adeegsanayo isku-dheelitirnaan gacmo khabiir ah, tikniyoolajiyad soo ifbaxaya, iyo deegaanno khaas ah leh, alaabadaada ayaa la soo uruurin doonaa oo lagu dhejin doonaa si sax ah oo sax ah. Oo ay la socdaan shaqaale naqshad abuur leh, xulasho ballaaran oo sahay ah, iyo fiiro gaar ah u leh-si faahfaahsan, alaabadaada ayaa la soo hor marin doonaa oo lagu xirayaa casriyeyn iyo deg deg aan lala tartamin.